Perricone MD wuxuu ballaariyaa aruurinta Daaweynta Maqaarka ee Xasaasiga ah ee hypoallergenic CBD
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Perricone MD wuxuu ballaariyaa aruurinta Daaweynta Maqaarka ee Xasaasiga ah ee hypoallergenic CBD
Perricone MD, oo ah astaanta soo saareysa horumar, xalka daryeelka maqaarka ee sayniska taageersan, ayaa ku dhawaaqday ku-darinteedii ugu dambeysay ee aruurinta Daaweynta Maqaarka ee Xasaasiga ah ee Hypoallergenic CBD oo leh Kareemka Xiirashada Nadiif ah oo aad u macaan.
Kaliya ururinta, alaabooyinka oo dhan waxaa ku jira 99% saafi ah Cannabidiol (CBD), oo laga keenay Mareykanka, oo ah maaddada muhiimka ah ee la soo bandhigay. CBD, oo caan ku ah faa'iidooyinkeeda dejinta, waxay gacan ka geysataa dib -u -nooleynta iyo dejinta maqaarka ugu dhibka badan iyo walbahaarka.
Kareemka Nadiifinta ee Aad-u-siman wuxuu ka kooban yahay qaab-dhismeed aad u hodan ah oo u abuuraya dusha dhif ah si raaxo leh oo xiirran oo nadiif ah. Cannabidiol wuxuu si aan kala go 'lahayn ula shaqeeyaa saliidda abuurka sativa abuurka iyo allantoin si loo waraabiyo oo loo jilciyo maaddada maqaarka iyada oo si qoto dheer loogu quudinayo maqaarka maqaarka oo u ekaanaya mid siman oo jilicsan oo leh nabarro yar yar, kuuskuusyo iyo googo-yar. Qaacidadan aan lahayn sulfate-ka waa mid aan ahayn comedogenic, vegan, dhakhtarka maqaarka ayaa tijaabiyay, waxaana aqoonsaday National Psoriasis Foundation iyo guddigeeda khubarada ah.
Dabayaaqada 2021, Perricone MD wuxuu sii ballaarin doonaa aruurinta iyadoo la bilaabayo Daaweynta Hypoallergenic CBD Dareenka Maqaarka Ultra-Lightweight Calming SPF 35 Veil. Muraayadan qorraxda ee ku salaysan macdanta ayaa ka ilaalisa maqaarka waxyeelada UVA iyo UVB inta ay dejinayso oo dejinayso maqaarka.
Markii la bilaabay aruurinta Hypoallergenic CBD Ururinta Daaweynta Maqaarka ee 2020, waxaan sii wadnaa inaan safka hore kaga jirno hal -abuurka CBD tan iyo markii ugu horreysay ee aan bilownay qaybtii 2017. " ayuu yidhi Robert Koerner, Madaxa Suuqgeynta Perricone MD. Iyada oo suuqa daryeelka maqaarka ee CBD uu ku sii kordhayo si xawli leh oo aan caadi ahayn, waxaan ku faraxsanahay inaan labadan qurbaanno cusub u keeno qaybta, annaga oo ilaalinayna ballanqaadkeenna astaanta ah in dhammaan qaacidooyinka ku jira xayeysiiskani ay nadiif yihiin, jilicsan yihiin oo wax ku ool yihiin.
Dhammaan Perricone MD Hypoallergenic CBD Ururinta Daaweynta Maqaarka ee Xasaasiga ah waxaa aqoonsaday oo oggolaaday National Psoriasis Foundation. Iyada oo lagu daray, khadka maanta ee Perricone MD Hypoallergenic CBD Ururinta Daaweynta Maqaarka Xasaasiga ah waxaa aqoonsaday National Psoriasis Foundation. Randal Beranek, Madaxweynaha iyo Maamulaha, National Psoriasis Foundation ayaa yiri "Shaabadda Aqoonsiga Aasaasiga ee Psoriasis waxay aqoonsataa badeecadaha la abuuray ama loogu talagalay inay noqdaan kuwa aan xanaaqin oo badbaado u ah dadka qaba cudurka psoriasis iyo cudurka 'psoriatic arthritis'. "Waxaan ku faraxsanahay inaan ugu dambayntii helno kiriim xiirashada oo lagu aqoonsado Tusaha Alaabta Seal."
Natiijooyinka ayaa naftooda u hadlaya. Tijaabinta macaamiisha, 97% tijaabiyeyaashu waxay yiraahdeen waa xanaaq-darro*, 94% waxay yiraahdeen waxay ka hortagtaa gubashada mandiil, nick iyo jar-jarid*, 92% waxay yiraahdeen waxay u oggolaanaysaa xiirashada aadka u dhow oo raaxada leh*.
*Iyada oo ku saleysan daraasad macmiil oo 196 rag iyo dumar ah 1 maalin kadib